Yaaliin imala xiyyaaraa dheeraa osoo hin dhaabbatiin taasifame milkaa'e - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Gareen balali'uu yaalii keessatti hirmaatan kun Hoji-gaggeessaa Daandii Xiyyaaraa Qantas Group Alan Joyce dabalchuun taasifame
Balaliin xiyyaaraa hunda caalaa dheeraadha jedhame magaalaa Niwu Yoorkirraa gara Sidiniitti taasifame milkaa'eera. Imalla xiyyaaraa baayyee saatii dheeraa fudhatu imaltootaa, paayiletootaafi xiyaara irraan dhiibbaa akkamii geessisuu danda'a jechuun qorannoon erga gaggeeffamaa tureen booda yaaliin balali'uu kan taasifame.
Daandiin Xiyyaaraa Awustiraaliyaa Qantas jedhamu kun imaltoota qabachuun balali'insa akka addunyaatti dheeraadha jedhame yaaliif taasise kana milkiin xumureera.
Xiyyaarri Boeing 787-9 ta'e imaltoota 49 qabatee saatii 19 fi daqiiqaa 16 osoo hin dhibbatiin Ameerikaa Niwu Yoorkirraa ka'ee hanga Awustiraaliyaa Sidiniitti balali'eera.
Balala'insa xiyyaaraa dheeraa si'aayinaan eegamaa jiru
Rakkoo daandii xiyyaaraa mudateen imaltoonni kumaan lakkaa'aman danqaman
Balali'uu kallattii taasifame kanaan kiiloomeetira 16, 200 imaleera xiyyaarri kun.
Kampaaniin kun ji'a dhufus Landanirraa gara Sidiniitti osoo hin dhaabatiin yaaliidhaaf balali'uudhaaf karoora qabaachuu beeksiseera.
kampaniin Qantas jedhamu kun sarara fagoo kana tajaajila kallattiin dhuma bara 2019 kennuu eegaluuf ni murteessa jedhamee eegama.
Rakkina boba'aa guutachuu mudachuu malu hambisuudhaaf boba'aa gahaa ta'e qabachuu, shaanxaan baayyisanii akka hin qabannef daangessuufi fe'isa dabalataa kan kaargoo dhorkuu akka falaatti yaadameera.
Imaltoonni daandii xiyyaaraa kana fayyadamuu barbaadan ammoo saatii Sidinii waliin tolfachuudhaan halkan waarii booda akka imaluu jalqabanitti of qopheessu.
Yeroo imalanittis, saatii jahaan booda nyaata Kaarboo Hayidireetii hedduu qabaatu dhiyeessuufiifiin, ibsii keessoo dimismisaa taasisuun akka rafan ni jajjabeeffamu.
Qorannoo yaalii balali'uu kanarratti taasifame kan akka danbalii sammuu paayileetotaa, sadarkaa hormooniin Melatonin jedhamu itti jijjiiramuufi jijjiiramu akkasumas, kutaawwan imaltoonni itti sochii taasisanirratt ture.
Yeroo dhimmoota kanarratti qorannoon taasifamurratti imaltoonni garaa garummaa saatii ardii tokkorraa gara biraatti (time zone) jiru keessa qaxxaamuran maaltu qaama isaaniirratti akka mudatu ilaalameera.
"Kun aveeshinii keessatti waan jalqabaafi sadarkaa barbaachisaa irra ga'amedha. Bu'aan yaalii kanaa tajaajila idilee imala xiyyaaraa saffisiisuun namoonni addunyaa kanarraatti gola tokkorraa ka'anii gola biraatti akka imalan akka danda'amu dursee kan agarsiisedha," jedhan Hoji-gaggeessaan Daandii Xiyyaaraa Qantas Group Alan Joyce.
Hanga ammaatti balali'insi xiyyaaraa akka addunyaatti dheeraadha jedhamu fageenya kiiloomeetira 15,344f osoo hindhaabbatiin saatii 18fi daqiiqaa 25 kan gaafatu Singaappooriirraa gara Niiwu Yoorkitti kan taasifamudha.
Balali'insi Singaappooriirraa gara Niiwu Yoorkitti taasifamu kun bara darbe ture Daandii Xiyyaaraa Singaappooriin kan jalqabame.
Baroota dhiyoo keessatti gabaa industirii aveeshinii keessatti daandii akka malee dheeraa ta'e waldorgomuun baballachaa dhufeera. Daandiiwwan xiyyaaraa hedduunis toora balali'uu isaanii dhedheereffataa jiru.
Daandiin Xiyyaaraa Qantas kunnillee, bara darbe tajaajila balali'uu osoo hin qubatiin saatii 17 dheeratu Perzi irraa Landanitti jalqabeera.
Daandiin Xiyyaara Qaataar ammoo tajaajila balal'iuu saatii 17.5 Akkulaandfi Dohaa gidduu baruma darbe jalqabeera.
Xiyyaarri Singaapoor osoo hin dhaabatiin km 15,000 balali'uufi
Rakkoo 'Wow Air' mudateen imaltoonni kumaatamaan lakkaa'aman danqaman